Ndị na-azụ ọzụzụ ọ dị njọ maka igwe kwụ otu ebe gị? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ndị na-enye ọzụzụ igwe kwụ otu ebe maka ọrịre - ịza ajụjụ ndị a
Ndị na-azụ ọzụzụ ọ dị njọ maka igwe kwụ otu ebe gị?
Mgbe “ịnyịnya na aonye ọzụzụga-emebinke gicarbon eku ”akụkọ ifo e eze busted, ime ụlọ ịnya pụrụ ịbụ ihe iyi egwu na-igwe kwụ otu ebe gịna ụzọ abụọ: wheel nje na ajirija corrosion.04.17.2020
Bịanụ na otu ọzọ Jụọ GCN-ything.- Nke ahụ bụ eziokwu, ị na-ajụ anyị ihe ọ bụla na anyị ga-eme ike anyị niile ịza ya. Mbụ, Tom, anyị nwere ajụjụ gbasara oke ala.
Nke a sitere na Jeremy Emilio bụ onye jụrụ kedu ka m ga-esi weta nwanne m nwanyị, enyi nwanyị ịnyịnya igwe. Ugbu a, ihe nzuzu na-ahụ ihe niile. Smale Rider na-egosi anyị, 'Chere, ha abụọ bụ?' Luciano Namo kwuru, sị, 'Ikwesiri ịchọpụta ihe ole na ole, Jeremy, gịnị kpatara gị na nwanne gị nwanyị? 'Ma echeghị m na anyị bụ ndị a Nwere ike ịza ajụjụ Tom.- Ọ dị mma, ọ dị mma.
N'ihi na Jeremy gakwuuru ndị niile na-ekwu okwu banyere okwu wee sị, 'Mba, iche.' - Nke ahụ bụ enyemaka. Ọ dị mma, nke ọma, ihe nwanne gị nwanyị na-eme ma ịgba ịnyịnya ígwè na-aga, Tom, ikekwe ị nwere ahụmịhe karịa n'ihi na ị nwere nwanne nwanyị ma anaghị m, nke gị bụ onye nwere ezigbo nkà ma rụzuo ịgba ígwè, ọ dịkwa obere, yabụ gị aghaghi ime ihe kwesiri - nwata na ngwa ngwa karim.
O ruokwala ọtụtụ afọ. - Achọghị m ịgwa gị nke ahụ, mana ee. - Ọ bụ eziokwu, ọ bụghị ya? - Ee. - Kedu ka Annie si banye ịgba ịnyịnya ígwè? Echere m na Annie banyere n'ime ịgba ịnyịnya ígwè n'ihi na anyị bụ ụmụaka, ma eleghị anya iri ma ọ bụ iri na abụọ.
Ma ọ bụ naanị ihe ezinụlọ. Yabụ ọ bụrụ na nwanne gị nwanyị toro eto nke na gị na ndị mụrụ gị ka ga-eso ịnyịnya ma ọ bụ ihe ọ bụla, naanị ịnụ ụtọ igwe kwụ otu ebe bụ ebe dị mma ịmalite. Ọ bụrụ na ha etolitego ma chee na ọ dị ha mkpa ịmalite ịgba ịnyịnya ígwè, amaghị m n'ezie.
Cafe na-agba ịnyịnya? Caffe cafe bụ ezigbo ụzọ iji webata ndị mmadụ ịgba ịnyịnya ígwè. - Ee, echere m na ọ nwere ike bụrụ naanị maka ikpori ndụ, dịka i kwuru, wee nwaa ịghara imebi ha obi, ewegharala ha ugwu nzuzu ma hapụ ha n'akụkụ okporo ụzọ, n'okporo ámá ndị dị jụụ, nke a dị ezigbo mkpa . Ọ dịghị onye na-enwe mmasị ịzụ ahịa mgbe ha malitere ịgba ịnyịnya ígwè.
Enweghị m mmasị na okporo ụzọ ugbu a. Mana ee, ya mere ka anyị pụọ. Olileanya ha ga - enyere gị aka Jeremy.
Ọ dị mma, ọzọ, anyị nwere ajụjụ a. Oh, enwere m mmasị t.By Jukka Pakkanen.
You na-edebe ịnyịnya ígwè ochie gị ị hụrụ n'anya? Kedu ihe ị ga - eme ndị ochie ma ọ bụrụ na ịhọrọ nke ọhụrụ? Kedu ihe ị na-eme? - Ọ bụrụ na m nwere nke ochie ahụ, ọ ga-abụ na m ga-ere ya .- Ee, ị naghị achọ ịchekwa ihe, nri? - Mba, enwere m igwe kwụ otu ebe nke m debere, enwere m igwe kwụ otu ebe nke m debere kemgbe ọtụtụ afọ na-atọ m ụtọ ịnya oge ọ bụla. Anyị na GCN na ndị ịnyịnya ígwè anyị nọ n'ọnọdụ obi ụtọ nke na anaghị m eche na mkpa s dị ka ịgbanye igwe kwụ otu ebe m oge niile - ee.
Anọ m na-edebe oge site na ụbọchị igwe kwụ otu ebe n'ihi igwe kwụ otu ebe zuru oke weghara ohere. Na teknụzụ ọ gafeela oge ọ bụla. Ma eku bụ ihe pụrụ iche.
Ma mgbe ahụ, edebere m igwe kwụ otu ebe site na ụbọchị ịgba ọsọ m, ọkachasị ma ọ bụrụ na enwetaghị m nnukwu igwe kwụ otu ebe site na GCN, m ka nwere abụọ nke m. Dika odi, ha adighi ewu ewu. Mma m hụrụ ya n'anya nke ukwuu. - M na-eche ka Matt si eme? N'ihi na ọ hụrụ ya 2000 Giro D'Italia igwe kwụ otu ebe.
Ma ọ bụ achọtara igwe kwụ otu ebe Giro D'Italia 2000 na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe na Italy, ya mere ọ na-esochi ya. Nke a bụ n'ezie igwe hụrụ n'anya n'anya n'ihi na enwere ọtụtụ ncheta dị ukwuu metụtara ya - Eleghị anya ọ bụghị ọtụtụ nnukwu ncheta ahụ na agbụrụ ahụ. Ya na ya nwere ezigbo oge.
Nri. Ee, ya na ọdịda na mmerụ ahụ. Ọ dị mma, na-esote.
M ga-echegbu onwe m maka iji igwe ikuku carbon m na turbo ọzụzụ? ? Eku ahụ ọ ga-agbaji n'okpuru ibu dị arọ? N'ụzọ bụ isi, nke a bụ akụkọ ifo a na-ahụkarị banyere okpokoro eriri carbon. Na ikwesighi iji ha na ndi nkuzi turbo. Nke bụ eziokwu bụ, site na ihe anyị nwere ike iji mara nke anyị gwala ndị na-emepụta ya bụ na ọ nweghị onye n’ime ha yiri ka ọ na-ekwu na akwụkwọ ikike gị ga-abụ ihe efu ma ọ bụrụ na ị jiri ya na turbo ọzụzụ.
Nke ahụ na-agwa m, n'echiche m, ọ dị mma. Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwaa? Ana m achọ n'ezie onye nwere ahụmịhe nke ikuku nke onye na-azụ turbo gbawara, ịnweghị ike ịchọta nke ahụ, nri? - Ee, ị nweghị ike. Echere m na nchegbu ahụ nwere ike ịbụ na a na-edozi igwe kwụ otu ebe wee na-agagharị.
Ma anụtụbeghị m ya. - E nwere ọtụtụ ịnyịnya ígwè ndị meworo agadi nke nọrọla na ndị na-azụ ihe nkesa ruo ogologo oge ma gosipụta ihe ịrịba ama nke nrụgide. Laghachi na akụkọ ifo banyere eriri carbon, anyị nwere isiokwu na ya, ọ bụghị anyị? - Anyi nwere - O di ya.
Ọ bụ ihe asaa ịmaghị gbasara eriri carbon. A na-ebibi ọtụtụ nghọtahie n’isiokwu a. Lee ya anya. (Rock Rock) (Oge okpomọkụ) - Odot nke akụrụngwa anaghị adabere na ihe ahụ.
Ekwesịrị iji akụkụ dị iche iche kee nke ọ bụla. Admi N'ezie, na carbon, dị ka ọ bụla etiti ihe onwunwe, e nwere ihe ize ndụ na ị nwere ike ịga na njedebe gị, Dịka ọmụmaatụ, iji nweta ihe mgbaru ọsọ dị mfe. Nsogbu na-ibilite, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ na-adịghị wuru n'ụzọ ziri ezi na Zuru oke Cracking Video.
Ajụjụ na-esonụ sitere na Sam Running, onye na-ekwu: Ogo ogologo ogologo ọ na-emetụta ọsọ nke igwe kwụ otu ebe gị? Kedu ihe ị chere si? - Ọfọn, anyị na-ekwu maka obere mmegharị ọsọ ọsọ pere mpe, ọ bụghị anyị. Dịka, n'ezie watt ma ọ bụ abụọ. Ma ọ bụrụ na ị nweta ya dị njọ, ọ nwere ike.
Ọ bụrụ na ọ siri ike, ọ nwere ike itinye ya na nkedo. Ma ọ bụrụ na ọ dị ogologo, enwere ọtụtụ agbụ iji bulie. Anyị na-ekwu obere, pere mpe.
Mana ihu ọma ị ga - enweta ya maka mgbanwe gị. Ma mgbe ahụkwa igbochi agbụ gị ka ọ ghara ịgbapụ ma sagging. Ya mere ee, nweta ya maka ihe ndị a kama ime igwe gị ọsọ.
Na na na, Tom. Nwere ike ịza ajụjụ a? Mgbe unu niile na-eme njem gaa mba ofesi ịse ihe nkiri, nke ahụ bụ Ryan Donnelly n'ụzọ, ị na-ebute onye ntụgharị ma ọ bụ na ị na-agbanye ya ma nwee olile anya nke kacha mma. Kedu ihe nke ahụ ga-ewetara gị? Akara? - Ọfọn, Ryan, anyị anaghị eso onye ntụgharị okwu njem, anyị anaghị asụ ọtụtụ asụsụ na-abụghị Bekee. Offọdụ n’ime unu nwere ike ịna-eche ma ànyị na-asụ bekee nke ọma ma ọ bụ na anyị amaghị.
Anyị maara mkpụrụ okwu ole na ole, mana ọtụtụ ebe anyị na-agbapụ na-anata ọtụtụ ndị Bekee ma ọ bụ ndị ọgba tum tum ndị mba ọzọ. Ya mere, ndị obodo na-asụkarị Bekee. Mana ọ bara uru ịmụ obere mkpụrụ okwu ma ọ bụrụ na ị nọ ebe ọ bụla.
Echere m na nke ahụ bụ ihe anyị ga-amụ n'isiokwu na-esonụ, ya bụ, “Emehieghị ise ị na-ekwesịghị ime mgbe ị na-agba ịnyịnya ná mba ọzọ.” (Funky music) - Ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọ ala ebe a obere osisi, a bit kwụsịrị amia ụzọ, maa kwesịrị ime gị nnyocha. Lelee nri mpaghara, kedu ka ụzọ si aga, ụlọ ọgwụ ọ dị nso, onwere bi? ke shop nso? - Eeh.
N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​nwere ike inwe udo nke obi. O nwekwara ike belata ntakịrị nchegbu ma mee ka ị pụọ n'ọnọdụ siri ike. N'ezie, nke a abụghị iwu ọjọọ ịgbaso ọbụlagodi mgbe ị nọ nso ụlọ gị - yabụ jụọ ajụjụ ọzọ.
Nke a sitere na Tommy L3. 'Hey, ana m achọ ịnya ịnyịnya ntakịrị ugbu a, kedu ka m ga-esi nwetaghachi mkpali na agụụ maka ịnya ịnya ịnya nke m nwere mgbe m malitere? Tom, gini ka i chere enyi a? - Nke ahụ bụ ajụjụ siri ike, ọ bụghị ya? N'ihi na anyị amaghị ma ọ bụrụ na ị hụrụ onwe gị n'ụzọ ụfọdụ bnọ nkịtị gwụrụ na demotivated si na-agba ịnyịnya, Tommy, n'otu n'okporo ámá, ma ọ bụ ihe dị ka na kwa ụbọchị. M ga-atụ aro ma ọ bụrụ na ịchọta ihe na-agwụ ike ma ọ bụ na-eweda gị ala, zuo ike ma ọ bụrụ na ị nwere ike.
Ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ọzọ nke iga iji ruo ọrụ ma ọ bụ ihe ọzọ. Were ụbọchị ole na ole, gbanye ọhụụ, wee hụ ma ị ga-ahụ ụzọ ndị ọzọ ị ga-anya. Achọpụtara m mgbe ọ bụla m nwere obere mkpamkpa na ihe kachasị amasị m ime bụ ịtụba na ngalaba gravel ma ọ bụ ngalaba na-apụ apụ naanị iji mee ka ihe dị ọhụrụ ma mee obere ihe dị iche.
Kedu maka gị? - Ọ dị mma achọpụtara m na oge ụfọdụ mgbe achọghị m ịgba ịnyịnya n'ihi ihe ọ bụla, mgbe m manyere onwe m ịga ịnyịnya, ọ na-atọ m ụtọ ịnọ n'èzí. Yabụ, dị ka ihe niile, gee ahụ gị na isi gị ma mee ihe ị chọrọ. -Kpali onwe onye nwekwara ike ịrụ ọrụ ebube.
Ma ọ bụghị n'ime ogologo oge, enwere m ụbọchị ezumike na 30. Ebe m chere, nke ọma, achọghị m ịpụ na mgbe ahụ m ga-eme ya ma nwee ọ goodụ. Nke ahụ nwere ike ịrụ ọrụ! Anyị nwekwara, ihe ijuanya dị ịtụnanya, edemede zuru ezu na isiokwu a.
Ọ dị ka ndụmọdụ ndụmọdụ mmekọrịta. Dan na m kowara otua esi eme ka mmekorita gi na igwe gi. Ee ee, ọ gụnyere izu ụka ruru unyi. (egwu dị egwu) - soga naanị ya nwere ike ịdị mma.
Ma ọ pụkwara ịdị na-agwụ ike. A sị ka e kwuwe, naanị gị nwere echiche nke gị ruo ọtụtụ awa nke ụlọ ọrụ. Yabụ kedu ka gị na ndị ọzọ gbaa ịnyịnya? Ugbu a, ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ iso naanị otu onye ọzọ na-agba ịnyịnya, mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịnwe mmadụ atọ n'ime gị na-apụ apụ nke nwere ike ịhapụ onye na-enweghị nsogbu ịhapụ, ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ maka otu nnukwu otu.
Ọ bụ ndụmọdụ doro anya, mana ọ na-arụ ọrụ. Oge ga-agafe ngwa ngwa. Na mgbakwunye, ọbụghị naanị ịbịaru ebe ị na-aga ngwa ngwa, kamakwa maka ịnụ ụtọ usoro ịbata.
Nke a bụ otu ị ga - esi kesaa ndị otu kachasị elu ma nwee ezigbo oge n'ozuzu. - Ndị otu kachasị elu? - Ọfọn ajụjụ ahụ nwere ọtụtụ isi mkpịsị aka. Ya mere, echere m na anyị nwere ike ịza azịza.
Ma site na Free Wheeler. Onye nwere mkpịsị aka 182 'Echere m na ị ga - eme obere onyinye GCN kwa ọnwa ebe onye emeriri ga - eji igwe kwụ otu ebe erughị £ 150 maka njem ha niile, isiokwu GCN, na oge ezumike ha ga - aga rue ọnwa ọzọ nwere ike inwe olile anya. gbaputa.
Isi mkpịsị aka elu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nke a ma ọ bụ ihe yiri ya. Ndị mmadụ 182 nyere mkpịsị aka ahụ. Mgbe ahụ Free Wheeler nyere obere obere ntaramahụhụ ive ọzọ: 'could nwekwara ike ịnwe uwe ma ọ bụ uwe na-efu efu.' Kedu nke na-ada ụda dị njọ banyere igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụ yi uwe elu onye emeriri otu ọnwa. - Odi nma, n’ufufu ihe ima aka GCN adighi nma, ma ya fọdụ inye ntaramahụhụ maka otu ọnwa ma emesịa, ọ dịka ịyi onye nzuzu ịdị njikere maka ya.
Ọzọkwa, Tom, otu anyị siri chọpụta n’isiokwu anyị ka ị ga - esi nwee ike ịrụ ọrụ igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ. M ga-ebili nkeji ise n'isi ụtụtụ ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ bụghị m. Enwere m ike iji Canyon Aeroad m gaa ụgbọala. - Nri. - Eeh.
Na na na. Ajụjụ ikpeazụ, nke a sitere na Big Dog, Hey Big Dog, 'Hey GCN, ndị mụrụ m na-ekwu na ekwesịghị m, mana m kwesịrị ịzụta ọgwụ electrolyte na ntụ ntụ na-achọ ya, a bụ m naanị 16, ajụjụ nkịtị . Aga m ekewa nke a abụọ ma ọ bụrụ na m nwere ike, Tom.
Nke mbu, echere m na ị kwesiri ịkọwara ndị mụrụ gị ma ọ bụ mee ka ha lelee isiokwu a na, n'eziokwu, ọtụtụ ngwaahịa na-edozi ahụ maka egwuregwu ntachi obi bụ nri nkịtị anyị na-eri, ya bụ carbohydrates, n'ụdị stachi ma ọ bụ shuga, Electrolytes , nke bụ naanị nnu anyị na-eri na nri anyị.
Ihe mere anyị ji etinye ha n’ime karama anyị, n’akpa anyị azụ, na anyịnya igwe bụ n’ihi na ihe anyị chọrọ n’onwe anyị ga-eji dochie ha ọzọ. Mgbe m dị obere, enwere m mgbe agba ịnyịnya ígwè na oge oyi na-egbu mgbu site na ịda mmiri na amaghị ihe akpịrị ịkpọ nkụ bụ. N'ezie, agaara m erite uru dị ukwuu na taabụ electrolyte n'oge ahụ.
Ihe niile ọ bụ bụ ntakịrị nnu n'ime karama ahụ, mana ọ ga-egbochi m ịnweta nkwụsị site na ịnya igwe. Ikekwe naanị otu ihe ị kpachara anya bụ ngwaahịa egwuregwu. Ọ bụ naanị nri nkịtị, naanị protein ị chọghị ya.
Yabụ kama imerụ gị ahụ, wepụ ya. I na egbukwa ego na ya. Ya mere, anyị nwere otu isiokwu na mgbake ma enwere ọtụtụ ndụmọdụ dị mfe ma dị irè n'ebe ahụ.
Olileanya na nke a ga-enyere gị aka na ajụjụ ahụ. Oh chi m! Barry adịghị mma maka afọ 16. Ekwesighi m ịhụ nke ahụ. - Oh Chineke. (egwu dị egwu) - Ahụ gị chọrọ mmanụ iji gafere.
Karịsịa n'ụdị nke carbohydrates mgbe ị karịrị 65% nke oke obi gị, yana kwa abụba. Ewezuga njem dị mkpirikpi, ị ga-ejizi njem ọzụzụ ọ bụla mara mma. Ike gị na-echekwa n'ụzọ ụfọdụ mgbe ị na-apụ apụ. - Odi mma, a na m eche ụjọ nkebi ikpeazụ na-ewetara anyị na njedebe nke ajụjụ dị iche GC Ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na-ere ọkụ gbasara ịgba ịnyịnya ígwè, ka anyị pụọ na ajụjụ mmekọrịta ahụ siri ike na mbido, ma mee ka anyị mara ngwa ngwa na ngalaba ndị dị n'okpuru ma ọ bụ jiri akara hashtag #TorqueBack, lee ihe anyị mere ebe ahụ? na Twitter na ụdị ndị ọzọ dị iche iche nke mgbasa ozi mmekọrịta - ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ọdịnaya ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị rapaara na ngwụcha izu a ma chọọ ịmega, gịnị ma ị soro anyị Sion na-emega ahụ? ụzọ dị egwu dotlets? Isiokwu ahụ dị n’ebe ahụ. - Kpachara anya. Ọ bụ nnọkọ siri ike. - Ọ bụ obi ọjọọ.
Na nke a bụ n'ezie ihe na-esiwanye nkịtị n'ibu nsogbu ndị mmadụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma otu esi ewepụ ma dochie ihe mgbodo Pressfit nke a abụghị ọrụ kachasị mfe, anyị nwekwara akụkọ gbasara ya, nke ahụ dịkwa ebe ahụ - ma gbaa mbọ hụ na ị debanyere aha GCN tupu ị gawa, ọ bụrụ na ịnweghị ‘ ugbua. Iji mee nke a, dị nnọọ pịa ụwa, ọ bụ n'efu.
Ndị ọkwọ ụgbọ ịnyịnya ibu ọ bara uru?
N'ihe banyere mgbatị ahụ, ị ​​nweghị ike ịga na-ezighi ezi na nke ọ bụla. Ma n'ime ụlọndị na-akụ ịnyịnya ígwèna nkwụsianyịnya igwenwere ike inye mgbatị ahụ dị elu, ọ bụrụhaala na ị dị njikere itinye n'ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ime ka ahụ ike gị na / ma ọ bụ calorie dị ọkụ, nhọrọ ị bụ nke gị.08/31/2020
Kedu onye na-azụ igwe ịgba ịnyịnya kacha mma?
Nandị na-enye ọzụzụ ime ụlọ kacha mma
Kacha mman'ozuzu. Elite Direct 2 mmekọrịta SmartOnye na-enye ọzụzụ. $ 769.00.
Kacha mmamara iheonye ọzụzụ. Tacx NEO 2 SmartIme ụlọ ịzu.
Kacha mmaDirect ụgbọalaonye ọzụzụ. Unisky Direct DriveOnye na-enye igwe kwụ otu ebe.
Kacha mmantinye-larịịonye ọzụzụ. Wahoo Fitness Kickr SnapOnye na-enye igwe kwụ otu ebe.
Kacha mmammefu egoonye ọzụzụ. Saris CycleOps Fluid 2Ime ụlọ ịzu.
Ego ole ka ndị na-azụ igwe kwụ otu ebe?
Gịnwere ikenwetandị nkụzina-amalite site $ 50 niile ruo $ 2500 (ee, ndị mmadụdịdị njikere imefu yaukwuu). Agbanyeghị, n'agbanyeghị ụgwọ ahụ, ha niilendị na-azụ ọzụzụ ga-enye gị ikpo okwu maka ime ụlọịgba ígwè, naanị na ndị dị oke ọnụ nwere ọtụtụ nhọrọ na atụmatụ.08.03.2021
Chọghị otutu gia iji bido na Zwift. Ewezuga ndenye aha gị na Zwift n'onwe ya, ihe niile ị chọrọ bụ onye na-azụ turbo dị mfe, ihe ọsọ ọsọ, yana naanị ekwentị gị iji Zwift mee ihe - agbanyeghị, ịnwere ike itinye ego na ngwa dị ịtụnanya iji bulie ahụmịhe gị. Wahoo ji obi ọma nye anyị Kickr zuru ha ka anyị wee nwee onye na - azụ ọzụzụ na - arụkọ ọrụ ọnụ, onye ofufe, ma rịgoro na mgbanwe dịka ị nọ n'èzí. - Eeh.
Otú ọ dị, ajụjụ a bụ n'ezie ihe dị iche na ahụmịhe n'etiti ntọala abụọ a? Anyị chere na oge eruola ka anyị mee atụmatụ abụọ isi rue isi iji chọpụta. Mbido ọkwa. Anyị nwetara onwe anyị onye nkuzi na-eguzogide ụkwụ.
Ọ nwere akụkụ mgbochi magnetik nke enwere ike iji aka ya gbanwee ya. Onye obula nke gbara igwe ruo ogologo oge ga-amata udiri turbo a, nihi na, ikwu eziokwu, nke ahu bu ihe ndi na-azu turbo na adibu. Ma n'ihi nke a, ị nwere ike nweta ha ugbu a dịtụ ọnụ ala.
Yabụ nnukwu okwu mmeghe na ụwa nke ọzụzụ ime ụlọ m kwuru na mbido na ịchọrọ ihe nsị ọsọ. Ihe dị mkpa, Otú ọ dị, bụ na ọ bụ ihe mmetụta ọsọ ọsọ na-ejikọ na ngwaọrụ nke ị ga-eji ya. Ọ bụrụ na ị nwere ihe mmetụta ọsọ ọsọ nke na-eziga maka ANT +, ọ ga-abụ na m chọrọ nkwụnye iji bulie mgbaama na kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ ma ọ bụ ihe ọ bụla.
N'okwu a, ọ na-ezipụkwa site na bluetooth, nke pụtara na m nwere ike iburu ya site na ekwentị m, nke m ga-eji na nke a. Cheta itinye ihe mmetụta ọsọ ọsọ a n'azụ ụkwụ gị n'ihi na nke ahụ bụ naanị otu na-atụgharị. Ga-ejikọ ya na ngwaọrụ gị, ebe ọ nwere ike ịgwa Zwift ọsọ ọsọ ụkwụ azụ na-agba.
Ihe amamihe dị na ya ma ọ bụrụ na ị gwa Zwift onye na-enye ọzụzụ ị na-eji n'ihi na ha agụọla ole ịdọrọ onye nkụzi ọ bụla na-emepụta. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ọ mara etu ọsọ ụkwụ azụ na-agbanye, ọ nwere ike gbakọọ ike ole ị na-eji maka ya. (Joy Techno Music) - Ya mere, anyị nwere Wahoo Kickr, Onye Kickr Climb, na Kickr Headwind.
Wahoo Kickr bụ onye na-azụ turbo smart smart, ihe dị iche na nke a na nke Si jiri na mbụ bụ na igwe kwụ otu ebe m enweghị turbo nke na-aga n'ihu na-abịa nke zuru ezu na cassette nke ya. Nke ahụ kwuru, ị naghịzi eji ụkwụ nke aka gị ma ị gaghị ejedebe akara ndị ahụ na mgbidi niile. Ma n'ime bụ ezigbo ihe dị iche.
Turbo nwere ihe mgbochi na-agbanwe agbanwe na igwe ike, nke pụtara na ọ na-agbakọ ike m n'ụzọ ziri ezi ma dozie nguzogide m na-eche na pedals dabere na ebe m na-agba na Zwift. Nke a pụtara na ịrị elu ugwu ga-adị gị ka ị na-arị ugwu, ị ga-agbanwekwa akara gị. Nke mbu, na ihe anyi nwere n’ebe a bu Wahoo Kickr Climb.
Nke a na - atụgharị uche na - egosipụta ihe na - eme na Zwift. Ihe ruru 20% na-atụ anya na 10% na-atọkarị. N’ikpeazụ anyị nwere Kickr Headwind, nke a bụ onye ofufe na-ejikọ gị turbo ịzu ma ọ bụ obi ọnụego ileba anya na-edozi ndị jụrụ dabeere na osisi ike nke gị ịnya.
Nwere ike gbasaa nke a ma mee ka nke a ruo max. - Chris, anyị kwesiri Zwift? - Ka anyị mee ya. - Tupu anyị amalite, rịọ mgbaghara, enyi, maka ịme onwe gị ka ị banye ntọala ntọala.
Ọ na - eme na anyị enweghị ndị nkwụnye dị mkpa maka onye na - azụ gị ka m nwee ike bulie igwe kwụ otu ebe m n’elu ya. Ya mere, ị ga-agwa m ihe niile, enyi - ejighi m n'aka ma ọ bụrụ na ọ bụ mgbaghara kachasị ezi obi, mana ka anyị gaa n'ihu. - Ọ dị mma, ka anyị pụọ. (soft Techno music) - Ihe mbụ ị ga-achọpụta mgbe ị na-agba ntọala ntọala bụ na enweghị nzaghachi ziri ezi site na pedal.
Enweghị mgbanwe na nguzogide mgbe ị na-agbago ugwu ma ọ bụ ugwu. Ọ bụ ezie na echefuru m nke ahụ, echere m na ọ ga-abụ ihe ziri ezi ikwu na ọ bụrụ na ịnyabeghị onye na-azụ ọzụzụ, ị maghị ihe ị na-efu, yabụ lekwasị anya n'ihe ị na-enweghị, kama na ihe ị na-eme. Ka nwere ike iji akụkụ niile nke Zwift, banye ma gbanwee avatar gị, na-aga n'ihu n'ogo niile, nyochaa ụwa ma soro na njem ndị otu, ọrụ ọzụzụ ka dị.
Nwere ike ịdebanye aha ma jiri ohere nke ọzụzụ ọzụzụ Zwift nwere ma gbagoro ha Echefula na mbọ m na-agba ka bụ otu n'agbanyeghị onye na-azụ ọzụzụ. Atụmatụ arụmọrụ dị mma maka ọzụzụ kwa, ọkachasị mgbe ị na-achọpụta mmezi gị. Ọ bụrụ na ọ na-agwa gị na ị nwere FTP nke 200. nwetara watts, ma ị mụbara nke ahụ ruo 220, ndị a bụ ezigbo uru uru.
Ee, o nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu, na ọkwa nke njehie nwere ike ịpụta na ị si 240 watts gaa 270, mana were ya na ọ bụrụ na anyị anọgide na-eji otu ntọala ahụ, ọ ga-abụrịrị na nsonaazụ ga-agbanwe agbanwe. (soft techno music) - Kedu maka ntọala frill anyị mgbe ahụ? Kedu ihe anyị ga - eme nke ọma, na - agbaso site na ihe Chris kwuru maka ọzụzụ, mita ike na Kickris a bụ naanị 2% ziri ezi, nke pụtara na anyị nwere ike iji ya nyochaa ọzụzụ anyị nke ọma, ọ pụtakwara na anyị nwere ike ịhụ nke anyị nsonaazụ nke ya nwere ike iji ya tụnyere ndị ọzọ, dịka 2% ziri ezi bụ ihe dịka ọkọlọtọ ọla edo. Ọfọn, ị nwere ike ị gaghị enwe mmasị jiggling FTP gị n'ihu ndị ọzọ, mana ihe ọ pụtara na Zwiftis Na I tozuru oke Itinye nsonaazụ na ọsọ Zwift n'ihi na ndị Zwift Races maara na ị na-eji akụrụngwa tụkwasịrị obi na ị nwere ike ịkpọ ya ọnọdụ erg, na nke a bụ ebe onye na-enye ọzụzụ ga-emepụta ezigbo nguzogide achọrọ maka oge ọ bụla.
Nke ahụ dabere na nyocha nke Zwift mere dabere na aka m. Na omume ọ pụtara na ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, oge bụ 350 watts, ọ bụrụhaala na m gbanwee mgbatị ahụ, onye na-enye ọzụzụ a ga-eweta nguzogide a. Nke ahụ pụtara na m ga-anapụta watts 350, agbanyeghị ọsọ ọsọ ma ọ bụ nwayọ m pedal.
Agbanyeghị, maka m, ọ nwere ike bụrụ mmelite karịa na ahụmịhe ịkwọ ụgbọala bụ ọkachasị ama ama. Nzaghachi ị nwetara n'aka onye na-azụ ọzụzụ na-adabere na ihe na-eme na ihuenyo ahụ. Ya mere, mgbe m malitere ịrị ugwu, enwere m mmetụta nguzogide ahụ, nke pụtara na m ga-agbanwe gia, wee jiri ihu Kickr a gbagoo, ntụgharị igwe m na-agbanwe, nke pụtara na ahụ m na-agbanwekwa.
Ọ bụ ezie na anaghị m agbasi ike ndọda ugbu a, ọ dị m ka ọ bụ na nke a bụ ikpe ka m na-aga ala, nguzogide ahụ na-ada wee pụọ. Echere m na ọ dị mma ịsị na iji onye na-azụ ọzụzụ nwere ike imeziwanye mgbatị gị, dịka ọ bụrụ na ịnwere mita ike na igwe kwụ otu ebe, n'ihi na ị nwere ike igwu ala miri emi ma hụ na mgbatị ahụ, na ị na-eme dị ezigbo mma. Ma ihe ọzọ ewezuga ọzụzụ, ọ bụrụ na ị bụ naanị nnukwu onye na-agba ịnyịnya Zwift, ndị obodo, mmekọrịta mmadụ na ibe ya mgbe ị nwere ntọala a ga-eme ka ahụmịhe ahụ ka mma maka gị.
Mana ozi oma bu na uzo obula, n’ezie, odighi mkpa. Agbanyeghị, ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m ga - anwa ibufe site na nke a gaa na ntọala ntọala bụ ụdị ụfọdụ ị ga - ajụ gị oyi. Ya mere, ị ga-agba ịnyịnya na-ekpo ọkụ n'ime, yabụ ihe ochie ọ bụla dị mma karịa ihe ọ bụla.
N’agbanyeghi n’ezie, onye ka mma na - akwado ofufe, ọ ka mma ka jụrụ oyi gị dị mma. Ihe ọzọ bụ na ama Chris na-eji dị oke mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị, ị ga-ahụ na iji nnukwu ihuenyo ga-eme ka ijikọ gị karịa. Yabụ mbadamba, ma ọ bụ na nke a, Apple TV jikọtara na nnukwu ihuenyo, echekwara m na ejikọtara m ụwa nke ọma.
Ihe dị mma banyere ya bụ na ọ ga-ahapụ ekwentị gị n'efu maka ngwa ndị enyi. (upbeate techno music) - O meela ogologo oge kemgbe m na-eji Zwifton eme ihe n'ụzọ zuru oke n'ime ụlọ turbo dị ka nke a, ọ dịkwa ụdị ihe dị egwu na-enweghị mmetụta ịrịgo ma ọ bụ nwee mmịfe dị ka ndị ọzọ? gafere m ma ọ bụrụ na ahụtụbeghị m na agaghị m ama na atụfuru m ihe ọ bụla - Mba, mana ebe ị si na ịbụ onye na-azụkarị gị ka ị bụrụ onye nkuzi nwere ọgụgụ isi, kedụ ka ọ dị gị, nzọụkwụ a dị nso? - Ọ masịrị m nke ukwuu n'ihi na anaghị m eme ọzụzụ oge niile yabụ mgbe m banyere, naanị m chọrọ ịnya ịnyịnya ma ọ bụ na-agbasi ike n'oge ọ bụla, ụdị dị ka okwu nke ụdị, ma nwee mmetụta na ịrịgo ahụ dakwasịrị gị kama nke inwe ịgbanye gia iji gbanwee ike yeah echere m na nke ahụ bụ ihe ahụ, na mgbakwunye nke mgbakwunye nke ndị na-azụ ọzụzụ mmekọrịta a, ị ga-enweta mmewere ọ ga-ekwe omume karịa ma ọ ga-agbaji otu ọhụụ ọhụụ mara mma nke, dịka ị na-ekwu, inwe meghachi omume na ya igwe kwụ otu ebe m na-aga ebe ahụ mgbe ọchịchọ ahụ malitere.
To ga-emeghachi omume na ihe na-eme n'okporo ụzọ, n'ihi ya, ọ na-agbaji ihe, ị gbanwee, ị ga-eburu gị, jiri ya na mgbanwe ndị ahụ, ọ na-adị ka ịnyagharị n'èzí. Otú ọ dị, echere m na ike nke ntọala bụ na ị ka nwere ọtụtụ ihe nke Zwift dị ka i wee nwee mgbatị niile - ee - ị ga-enwe mmetụta zuru oke. Ha na-achịkwa ha kpamkpam ma ị nwekwara ihe ndị metụtara ọha mmadụ, yabụ na anyị na-agba ịnyịnya ọnụ, nri? - Ee, ma mu---Ọ bụ ezie na echere m na m hapụrụ gị - Uh, ọ dị ntakịrị na mmasị onye ọzụzụ turbo ka m wee mara etu m siri gbaa mbọ.- Ee.
Ọ bụ eziokwu? - Ee, eleghi anya. Ọ bụghị ebe dị anya - ee, ka anyị pụọ. (upbeate techno music) Iji mechie isiokwu a, anyị kwesịrị ikwu otu ihe karịsịa, nke ahụ bụ na anyị nwere ndị nkuzi ebe a na njedebe dị iche iche nke ụdịdị dị iche iche.
ọgba ịnyịnya japan
Ma ọ bụghị otu-ma ọ bụ ọnọdụ n'ihi na e nwere ndị nọ n'etiti, ọ bụ? Yabụ ị nwere ike ịnweta ndị nkuzi mmekọrịta mmekọrịta dị mfe nke anaghị eri nnukwu ego ahụ, mana nke ahụ ka na-enye gị mmekọrịta mmekọrịta ị na-enweta site na Zwift. Yabụ ị nwere ngalaba nkwụsi ike na - agbanwe agbanwe na igwe mita ike.- Iji nweta ọtụtụ ihe na tebụl turbo gị, ị ga-achọ ịdebe nrụgide taya gị, yana ikuku ikuku na ọnọdụ okpomọkụ n'ime ụlọ gị na-eji ya na.
Nke a ga - enyere gị aka ịkawanye ogo metrik arụ ọrụ. - Eeh, nke ahụ dị mma, yabụ oge ọ bụla ị wụliri na ya, ịmara na ọ na-atụ mbọ gị, ọ bụrụgodi na ọ dịchaghị oke dịka igwe ike ma ọ bụ onye na-enye ọzụzụ gbasara mmekọrịta. Ka anyị chee ya ihu, ọbụlagodi na enweghi ihe ndị a, ị ga-enweta ihe niile nke Zwift.
Yabụ ị nwere mmega ahụ niile ị kwuru na mbụ. Have nwere ihe niile gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe gị, ịnwere ike ịnya njem otu, ị nwere ike ịnya ụgbọ site na ụwa ndị a ezubere maka ịgba ịnyịnya ígwè. Nri, dị njikere na ị ga-etinye aka na ngalaba nkọwa dị n'okpuru.
Olileanya ị hụrụ na isiokwu a bara uru na nke mbụ na ihe ị chọrọ n'ezie iji malite Zwifting ma ọ bụ n'ezie na-esote usoro, mana ka anyị mara ihe ị na-eji kwa. Ọ ga-abụ ihe na-adọrọ mmasị ịgụ ihe ndị a na nkọwa.
Kedu nke ka mma ọzụzụ turbo ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe?
Ndị na-enye ọzụzụ Turbodịkarịsịrị obere karịa ịtụ oghoanyịnya igwe, ma ya mere ọ dị mfe karị ịgagharị ma chekwaa mgbe anaghị eji ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ mgbatị ahụ kachasị eke nke na-eme ka obi dịịgba ígwèna-emeghe ụzọ mgbe ahụndị na-enye ọzụzụ turbotrump n'imena-emega ahụ.
Achọrọ m onye na-azụ gị smart?
Mgbe anyị na-ekwu maka ọnụ ahịa ya, ọ bara uru iburu n'uche na ị naghịchoro onye nlezi anyana-agba ịnyịnya na Zwift. Asmart ọzụzụSite n'ibu data gị ike ma nwee ike ịgbanwe ndị na-eguzogide ka i wee nwee ike na-eche mebere ugwu nta, ma i nwere ike iji na-akwado kpochapụwoonye ọzụzụna ihe mmetụta ọsọ ọsọ kama.Dec. 12 2019
Kedu onye na-azụ ịnyịnya ígwè na-eji uru?
Ndị na-enye ọzụzụ TurbonkeUru- Kedundị na-azụ ọzụzụ na-eme proìgwèjirimaka ime ụlọ ọzụzụ? Featuring Tacx, Elite na ndi ozo.Ndị na-enye ọzụzụ Turboeji na-ele anya na mgbagwoju anya na ụjọ namakapeloton. Ha bụ maka ikpo ọkụ nke TT na nkeji oge n'oge oge oyi.4wa 4 2019
Gịnị mere ndị na-azụ ịnyịnya ígwè ji dị oke ọnụ?
Ọ bụ ezie na ụfọdụ dị mgbagwoju anya, na-enye atụmatụ ndị ọzọ ma bụrụ ndị a ma ama karịa ndị ọzọ, enwere ike ịnweta ọtụtụ n'okpuru $ 300 USD. N'ihi naịgba ígwèobodo ejiriwo ọrụ ntanetị dị ka Zwift, ọchịchọ maka ọgụgụ isindị nkụzina-aga n'ihu na-ebili n'ihi ahịa ndị ahụ ga-adịkwa.
Ndị ọkwọ ụgbọ ịnyịnya siri ike na taya?
.B.onye na-enye iwu igwebụ ihu ọma dị nnọọ a etiti na a mwekota jide gịigwe kwụ otu ebena ebe dị ka ị na-agba ịnyịnya na a ala na presses megide azụtaya, na -emepụta iguzogide. Aonye ọzụzụnwere ike ibibi ihe n'azụ gịtaya, ma, na-atụfu gịigwe kwụ otu ebeitule na traction.June 14. 2020bọchị 2020
Ndị na-akụ ịnyịnya ígwè na-adakọ igwe kwụ otu ebe niile?
Igwe kwụ otu ebe:Ndị na-enye ọzụzụnwere ikedabaraa dịgasị iche iche nkeanyịnya igwe, mana ikwesiri inyocha okpukpu abụọonye ọzụzụnaigwe kwụ otu ebenkọwa iji jide n'aka. Akụkụ ndị ọzọ: Ọtụtụ draịvandị nkụzichọrọ ka ị zụọkwa azụ cassette nke kwekọrọ na gịigwe kwụ otu ebeụgbọala.
Kedu ụdị ndị na-azụ igwe kwụ otu ebe na eBay?
Taya ahụ na-adị n’elu igwe, na-enye nguzogide. Ull ga - ahụ ọtụtụ ndị na - azụ ịnyịnya ígwè maka ire ere na eBay site na ụdị gụnyere CycleOps, Drivo na JetBlack. Typesdị ndị bụ isi bụ ndị na-azụ igwe ikuku, magnetik, na mmiri mmiri. Nke a bụ otu n'ime ụdị ejiji kacha ochie nke onye na-ahụ maka ịnyagharị igwe. Omume nke ịpịgharị ụkwụ na-enye ike na-akwado ya, nke na-enye nguzogide.
Ebee ka m nwere ike ịzụta onye na-enye ọzụzụ ịnyịnya igwe?
Ull ga - ahụ ọtụtụ ndị na - azụ ịnyịnya ígwè maka ire ere na eBay site na ụdị gụnyere CycleOps, Drivo na JetBlack. Typesdị ndị bụ isi bụ ndị na-azụ igwe ikuku, magnetik, na mmiri mmiri. Nke a bụ otu n'ime ụdị ejiji kacha ochie nke onye na-ahụ maka ịnyagharị igwe. Omume nke ịpịgharị ụkwụ na-enye ike na-akwado ya, nke na-enye nguzogide.
Kedu ihe ị kwesịrị ịma gbasara onye na-azụ ịnyịnya ígwè?
Kedu ihe bụ onye na-eji ịnyịnya ígwè? Ndị na-azụ ịnyịnya ígwè n'ime ụlọ bụ ihe eji egwu egwuregwu nke na-ahapụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè ka ha jiri ịnyịnya ígwè ha n'èzí na-azụ ụlọ. Nwere ike iji ha mgbe ihu igwe dị njọ mana ị ka chọrọ ịbanye na njem gị. Ha bara uru maka nwughachi mgbe ha merụrụ ahụ.